आइतवारको दिन सूर्य देवको यि १२ मन्त्रको उच्चारण सहित उपासना गर्नाले मिल्नेछ चमत्कारीक लाभ ! – Naya Kura Daily
July 26, 2020 143
काठमाडौं । हिन्दु धर्ममा हरेक दिनको उत्तीकै महत्व हुन्छ । हरेक दिन कुनै न कुनै देवताका विशेष दिनका रुपमा पुजाआराधना गरिन्छ । आइतवार सुर्य भगवानका लागि विशेष दिन हो ।
Prevयी हुन् यसअघि उल्टिएका सर्वोच्चका फैसला, पत्नीको विभत्स हत्या गर्ने रन्जनको के होला ?
Nextजव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित